Tahriibe Soomaali ah oo dib u laabtay kaddib markii uu wax kasta u
Sannad kasta, qaxooti iyo tahriibyaal badan oo Soomaali ah ayaa qaata go’aan adag oo ay kaga tagayaan qoysaskooda uguna badheedhayaan halista tahriibka, iyaga oo rajaynaya in ay nolol cusub ka bilowdaan Yurub.
Yaasmiin*, oo ka mid ah qaxootiga Soomaalidu waxa ay da’deedu jirtay keliya 26 sano markii ay ka tagtay Itoobiya islamarkaana ay qaadatay go’aanka ay kaga gudbayso Lamadagaanka Saxaara si ay iskugu daydo in ay u gaadho Yurub. Waxa uu ahaa socdaal cabsi badan oo khatar ah.
Markii uu dhintay Yaasmiin odaygeedu, waxa ay saaxiibbadeed ku tashkiiliyeen in ay Yurub tagto si ay nolol wanaagsan ugu hesho gabadheeda 9 jirka ah. Yaasiin waxa ay isku dayday in ay ka gudubto Suudaan si ay u gaadho Masar ugu na socdaasho qaaradda Yurub. Laba jeer ayaa la qabtay – markii kowaad waxa ay masuuliyiinta ku qancisay in ay booqanayso ehelkeeda oo Suudaan jooga, mar labaadkii se waxa qabsaday magafayaal. Kaddib markii ay ka gudubtay soohdinta u dhaxaysa Itoobiya iyo Sudaan, Yaasiin waxa ay magafayaashu u sheegeen in ay Masar ku geynayaan 250 doolar. Yaasmiin waxa ay xasuusanaynsaa in ay geed hoostii ku sugaysay gaadhi u yimaadda si uu xadka u gaadhsiiyo, bal se taasi beddelkeeda waa la garaacay waa na la kufsaday. Yaasiin waxa ay tidhi, “Meel ayaa uu i geeyay, wuu i garaacay ugu dambayna waxa uu igu hor kufsaday inantayda.”
Kufsigaasi waxa uu Yaasiin u sababay in ay uur qaaddo, gabadh ayaanay ku dhsahay Suudaan. Waxa ay ka cabsatay in qoyskeeda iyo saaxiibbadeed ay ka fogaadaan kuna takooraan ilmaha ay guur la’aanta ku dhashay. Intii ay joogtay Suudaan waxa ay is guursadeen nin Soomaali ah oo ka caawiyay cisbitaal si ay u soo kabato. Mar labaad ayaaay uur qaadday, laakiin guurkaasi ma noqon mid waara.
Aakhirkii, waxa ay Yaasmiin ku soo laabatay Itoobiya iyada oo wadata saddex gabdhood oo yaryar kaddib safar halis ah oo aan lahayn biyo iyo cunto oo ay kaga gudubtay lamadegaanka. Hadda waxa ay ku nooshahay xerada qaxootiga ee Kobe ee ku taalla deegaanka Soomaalida Itoobiya laakiin waxa maskaxdeeda ka guuxaya argagaxa ay soo martay waxaana ay la dhibaataysan tahay dhibaatooyin caafimaad oo ka dhashay dhaawacyadii soo gaadhay.
*Magacyada waxa loo beddelay si loo qariyo
Talyaanigu waxa uu dib u bilaabay masaafurinta tahriibayaasha sharci darrada ah oo uu ku celinayo Tuniisiya